Masinina fanapahana laser fibre mahazatra
Masinina feno fanapahana laser vita amin'ny fibre
Tube & Laser Sheet Fiber Laser Cutting
Masinina manapaka cnc Plasma
Masinina fanapahana cnc plasma Desktype
Masinina fanapahana cnc karazana gantry
Masinina fanapahana cnc cnc plasma
Masinina fanapahana cnc plasma roa heny
Masinina fanapahana cnc tsipika mahitsy Gantry
Masinina fanapahana plastika plastika vita amin'ny plastika Gantry
Masinina manapaka plasme flame cnc mavesatra
Fahafantarana ny orinasa
Misy maka takelaka vy notapahina tamin'ny laser mba hametahana trano
Ny milina fanapahana laser dia afaka manodina fantsom-by na takelaka vy, ary efa be mpampiasa amin'ny rafitra vy. Misy maka takelaka vy notapahina tamin'ny laser mba hametahana trano. Mampiasa takelaka vy notapahina tamin'ny laser ho toy ny hoditra izy io, manangona takelaka misy endrika samihafa toy ny piozila ...
Ilay fampirantiana - tohizo ny fanaovana sonia an-toerana mahafinaritra!
Famintinana ny vaovao: Tamin'ny 8 Mey, notontosaina araka ny fandaharam-potoana ny fampiratiana Hebei Cangzhou International CNC Machine Tool Tool. Bloor Laser dia nanolotra ny andiany vaovao an'ny milina fanapahana laser ary ny milina fanamafisam-peo amin'ny International Machine Tool Exhibition. Tamin'ny 8 Mey, Hebei Cangzhou International CNC Machi ...
Ny fampiharana ny milina fanapahana laser Shandong ao amin'ny sehatry ny lakozia sy ny fandroana
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny haitao maoderina, ny teknolojia fanodinana nentim-paharazana ny indostrian'ny lakozia dia novaina tsy tapaka. Amin'ny maha-tompon'andraikitra amin'ny indostrian'ny fanodinana vy ankehitriny, ny milina fanapahana laser fibre Shandong dia teknolojia vaovao mamorona ny fohy ...
Fanaterana masinina laser maodely lehibe endrika
Ny masinina fanapahana laser vita amin'ny metaly lehibe dia nojerena sy notiliana tao amin'ny ozinina ary vonona ny halefa. Tamin'ny 9 aprily, ny orinasa Bloer dia nanatitra ny entana ho an'ny mpanjifa ao amin'ny faritr'i Jinan. Ny entana nalefa tamin'ity indray mitoraka ity dia ny milina fanapahana laser lovia vaovao an'ny Bloer, ny maodely dia CE6025 ...
Maninona no vao mainka maro ny mpanamboatra nanomboka nanenjika ny masinina fanapahana laser
Miaraka amin'ny fivoarana sy ny fivoaran'ny siansa sy ny teknolojia, ny hafainganam-pandehan'ny fiainan'ny olona dia miha haingana hatrany. Amin'ity vanim-potoana ity dia ny vanim-potoanan'ny vola, ny ain'ny olona sy ny asany dia manomboka mitady fahombiazana avo lenta sy mazava tsara, ary ny milina fanapahana laser fibre dia afaka mamaly tsara ny efficie avo ...
Masinina fanapahana laser hafa no nalefa tany Ji 'nan Zhangqiu
Raha ampitahaina amin'ny karazana masinina fanapahana hafa dia manana tombony maro ny milina fanapahana laser, ao anatin'izany ny: marina kokoa ny fanapahana sy ny fahamendrehana, ny sisin'ny kalitao avo kokoa, ny sakan'ny fanapahana tery kokoa, ny faritra tsy voan'ny hafanana ary ny tsy fiovana ara-materialy, ny tsy fandotoana ara-nofo sy ny fako, ny maintenanc ambany. ..
Ny fitaovana tiana hambara ho an'ny marina
Masinina fanodinana laser fibre fanodinana filana fametahana amin'ny metaly ny akora metaly Ireo metaly dia manondro ireo singa metaly na fitaovana metaly izay misy singa metaly indrindra. Anisan'izany, anisan'izany ny metaly, alloys, metaly manokana, sns. Ny fandrosoan'ny fiarahamonina dia akaiky ...
Inona avy ireo marika an'ny milina fanapahana laser fibre mety amin'ny fanapahana lovia manify?
Ny fanodinana metaly manify dia tsy mitaky herin'ny fitaovana fanapahana, ka rehefa misafidy milina fanapahana laser fibre ianao, ny lakileny dia ny fijerena ny fahombiazan'ny vidiny. Raha tsorina dia tsotra izao, ny milina fanapahana laser fibre misy vidiny lafo loatra dia manana fahombiazana azo antoka sy avo lenta, saingy ...
Ahoana ny fomba hisorohana ny fihenan'ny fampisehoana fanodinana laser laser?
Masinina fanapahana laser ampiasaina mandritra ny fotoana lava, hihena ny fahombiazan'ny fanodinana, miadana kokoa ny hafainganam-pandeha, ratsy kokoa ny vokatra azo avy amin'ny fanapahana. Ka inona no hataontsika raha izany no mitranga? Voalohany indrindra, ho an'ny toe-javatra, tsy maintsy fantarintsika ny antony nahatonga ny fahasimban'ny zava-bita, ny B ...
Hafainganana fanodinana milina fantsom-by
Ny milina fanapahana laser amin'ny paipa dia antsoina koa hoe milina fanapahana laser fantsom-by, ary tsy mitovy ny milina fanapahana laser kely, ny milina fanapahana laser fantsona dia ampiasaina manokana hanapahana fantsom-by vy miaraka amin'ny hateviny. Fantatsika rehetra fa ny fanapahana fantsom-by vy dia tena sarotra ary mitaky v ...
Angony ny angovo ary andeha handeha indray - Tanteraka soa aman-tsara ny fivoriana fivarotana kinanjo an'i Shandong Buluoer 2021
Mba hampiharana lalina ireo tanjona napetraka ao amin'ny drafitra stratejika fanao isan-taona, mametraha fototra mafy orina ho an'ny taona vaovao izay hanomboka. Tamin'ny 1 martsa lasa teo, i Buluoer dia nanao ny fivorian'ny kick-off marketing sy ny fianianana tamin'ny 2021; Filohan'ny Vondrona Shandong Jubangyuan Andriamatoa Jing Fengguo, Tale Jeneraly Andriamatoa Sun Nin ...
Maninona no mihabetsaka ny mpanamboatra manomboka manenjika ny milina fanapahana laser
Miaraka amin'ny fivoaran'ny siansa sy ny haitao dia mihamitombo hatrany ny fianan'ny olona. Amin'izao vanim-potoana izao dia manomboka mihazona ny fahombiazan'ny olona sy ny asany ny ain'ny olona sy ny asany, ary ny milina fanapahana laser vita amin'ny fibre dia afaka mamaly ny fahombiazana avo lenta sy arahin'antoka ...
Masinina fanaovana sokitra laser an'ny co2
Adress:No. 666 Fengnian Av., Faritra ara-toekarena Mingshui, Distrikan'i Zhangqiu, Jinan City, Shandong, Sina